Yaa fashiliyay wadahadalladii Mucaaradka iyo Xukuumada? | KEYDMEDIA ONLINE
Yaa fashiliyay wadahadalladii Mucaaradka iyo Xukuumada?
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ahaa guddi loo xir saaray in ay u dhexeeyaan Xukuumadda xil gaarsiinta iyo Midowga Musharixiinta ayaa sheegay in natiijo la’aantii ka dhalatay shirkii Saddexaad ee Mucaaradka iyo Rooble ku dhex maray Muqdisho uu sabab u ahaa Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Gaadiidka Cirka iyo Dhulka, Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi ‘Dheere’ oo wakiil ka ahaa Fahad Yaasiin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Mahad Salaad oo xalay hadal ka jeedinayay kulan lagu casuumay oo ka dhacay aaladda Clubhouse, ayaa sheegay in Cabdiraxmaan Dheere uu af-duubay RW Rooble, isla markaana uu si cad uga hor yimid dalabkii ay mucaaradku hor dhigeen Xukuumadda uuna isagu diiday in wadahadalladu sii socdaan.
Xildhibaan Mahad waxa uu xiqiijiyay in Cabdiraxmaan Dheere iyo Taliyaha Nabad-sugidda Fahad Yaasiin ay isku dayeen in ay baajiyaan kulankii dhacay khamiistii la soo dhaaafay, iyaga oo aan ku wargalin RW Rooble ‘Rogane’.
Cabdiraxmaan Dheere wuxuu guddigii dhexdhexaadinta, garabkiisa Musharixiinta ,u sheegay in la baajiyo kulankii Khamiista isaga oo aan sheegin wax sabab ah, kadib Xildhibaan Mahad wuxuu arrintaas wax ka weydiiyay RW Rooble, oo yiri “Waxba kalama socdo ee Musharixiinta ii ballami”.
“Cabdiraxmaan ayaa isoo wacay, wuxuu igu yiri, shikii loo ballansanaa maqribbkii haddii aad baajin weyseen, ogaada waxba in aysan ka soo baxayn oo lagu kala tagi doono”, ayuu yiri Xildhibaan Mahad.
Xildhibaan Mahad Salaad wuxuu hoosta ka xariiqay in Cabdiraxmaan Dheere uu ka baxay siiqooyin ay hore isla meel dhigeen guddiga dhexdexaadinta labada dhinac, halka uu sidoo kale si cad uga soo hor jeestay kulan afaraad oo la soo jeediyay in la isku soo laabto Isniinta birri ah.
Guud ahaan qodabada laga hadalay, Cabdiraxmaan Dheere, wuxxu Fariin ahaan ugu dirayay Fahad Yaasiin oo jaawaabtiisa ay mar walba sugayeen Rooble iyo kooxdiisa.
Mahad Salaad wuxuu layaab iyo amakaag ku tilmaamay Ra’iisul Wasaare aan hadli karin oo uu ka amar sarreeyo Wasiir Dowlihiisa, “Nasiib darro, Sagaalka saacadood ee shirku socday qofka la doodayay Musharixiinta, ma ahayn RW, ma ahayn Guudlaawe, mana ahayn Cumar Finish ee wuxuu ahaa, Cabdiraxmaan Dheere oo Wasiir Dowlo ah”, ayuu yiri Xildhibaan Mahad.
Cabdiraxmaan dheere waxa ay aad isugu dhowyihiin siyaasad ahaan iyo heyb ahaanba Taliyaha Nabad sugidda Fahad Yaasiin, wuxuuna shirka wakiil buuxa uga ahaa Fahad, oo fariimihiisu sababeen in Shirka lagu kala boodo.
Madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo ayaa shir la leh xubnaha wakiilada Beesha Caalamka ee loo yaqaan C6+, shirka ayaa ka socda gudha xeyndaabka Xalane.
Deni oo hortagaya Baarlamaanka Puntland
Warar 17 April 2021 11:16